Filoha tany Abidjan : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika Rajaonarimampianina -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha tany Abidjan : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika Rajaonarimampianina
22/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voaporofo ny fahatokisan’ireo firenena vahiny ny Filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina. Ny filoham-pirenena ivoarianina, Alasane Ouattara, mihitsy no tonga nitsena sy nandray ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara teny amin’ny seranam-piaramanidin’i Abidjan, ny alakamisy teo. Marihina mantsy fa mizotra ary tanterahina ao Côte d’Ivoire, ao Abidjan, ny lalaon’ny frankôfônia andiany fahavalo.
Ankoatra ny filohan’i Côte d’Ivoire, tazana teny an-toerana sady niarahaba ny fahatongavan’ny Filohan’ny Repoblika malagasy ihany koa ny sekretera jeneralin’ny Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaelle Jean, niaraka tamin’ny Filoha lefitr’i Côte d’Ivoire sy ireo minisitra ivoarianina isan-tokony. Nakotroka ny fandraisana ny Filoham-pirenena malagasy sady filohan’ny OIF rahateo, Hery Rajaonarimampianina, tamin’io fahatongavany io.
Ankoatra izay, feno ny fandaharam-potoanan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina satria nandray ireo minisitra frantsay roa tao amin’ny Hotely lehibe nitoerany ny Filoha nialoha ny fitsidihana ireo atleta sy ireo mpanakanto miatrika sy mifaninana amin’ny lalaon’ny Frankôfônia andiany fahavalo. Tamin’izany indrindra no nanomezan’ny Filoham-pirenena malagasy toromarika azy ireo amin’ny hiarovana mafy ny voninahitr’i Madagasikara amin’io fifaninanana iraisam-pirenena goavana io.
Etsy andaniny, noraisin’ny Filohan’i Côte d’Ivoire, Alasane Ouattara, niaraka tamin’ny sekretera jeneralin’ny OIF, Michaelle Jean, teny amin’ny Lapam-panjakan’i Abidjan ihany koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tamin’izany indrindra no niarahaban’ny Filoham-pirenena ny fikarakarana sy nandraisan’i Côte d’Ivoire ny lalaon’ny Frankôfônia andiany fahavalo. « Miarahaba sy misaotra manokana an’i Côte d’Ivoire aho tamin’ny nanekeny ny fandraisana ny lalaon’ny Frankôfônia andiany fahavalo. Mahafaly ahy ny fahatongavako eto Abidjan ary mino aho fa ho fahombiazana lehibe ho an’i Côte d’Ivoire izany », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Marihina fa amin’ny maha Filohan’ny OIF ny Filoham-pirenena Malagasy dia izy no nanokatra ny lalaon’ny Frankôfônia andiany fahavalo. « Misokatra ary afaka manomboka amin’izay ny Lalao », hoy izy.
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Hiofana any Etazonia sy Alzeria ireo zandarimariam-pirenena
Nandray diplaomaty ambony roa miasa eto Madagasikara ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miadidy ny zandarimaria ny alakamisy teo dia Andriamatoa David Ranauldi, Régional Sécurity Officer miasa ao amin’ny masoivohon’i Etazonia, misahana ...Tohiny
Basikety – Festival Somaroho 2018 : Hiavaka ny fifaninanana